प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा व्यवस्थापन पुरै फितलो (भिडियो) - Everest Daily News
धरान । धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा व्यस्थापन फितलो हुन थालेको छ । कोभिड अस्पतालमा व्यवस्था फितलो भए पछि बिरामीका कुरुवाहरुले नै आपत्ती जनाएका हुन्। कोभिड अस्पतालको बाहिर करिब ६० देखी ७० जना कुरुवाहरु पाल टागेर बसेका छन्। जताततै फालिएका फोहोर मैला समेत उठाएको हुँदैन्।
एक जना संक्रमित बिरामीको ४ वा ५ जना कुरुवा हुँदा समेत प्रतिष्ठानको म्यानेजमेन्ट टिम मौन छ । प्रतिष्ठानको धर्मशाला पनि खाली छ । शौचालय नभए पछि उनीहरु जथाभावी दिशापिसाव पनि गरिरहेका छन्। हात धुने सावुन पनि छैन् भने पानीको व्यवस्था पनि छैन्।
मास्क , सेनिटाइजर तथा मापदण्ड पुरा नहुँदा कुरुवाहरु नै संक्रमित पो छन् की भन्ने मानिसमाथि आशंक शंका उत्पन्न हुन थालेको छ । यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले लागु गरेको लकडाउनको पनि धज्जी उडेको छ ।
कोभिड हस्पिटलबाट सानो सानो भवनको संरचना गरेर जथा भाबी बस्नाले थप अस्पतालमा संक्रमणको अवस्था सिर्जना र थप संक्रमित हुने जोखिम बढ्दै गएको छ। अस्पतालमा नै होटल जस्तो भएको छ । कुरुवा रक्सी, चुरोट माछा मासु आदी खाएर जताभावी फोहोर गर्दे आएका छन्।
म्यानेजमेन्ट बारे कुरा गर्न फोन सम्पर्क गर्दा कोभिड अस्पतालका म्यानेजमेन्ट प्रमुख डा. ज्ञानेन्द्र मल्लको फोन निकै पटक गर्दा उठन्। प्रतिष्ठानका डाइरेक्टर गौरी शंकर अग्रवालको पनि फोन उठेन्। उपकुल पतिको पनि फोन उठेन्।
कोभिड अस्पतालमा एक कर्मचारीले अस्पतालका म्यानेजमेन्ट प्रमुख डा. ज्ञानेन्द्र मल्लको फोन निकै पटक गर्दा नउठाएको केही दिन देखी वेपत्ता भएको कुनै समस्याको सावधान नगरेको बताएका छन्। कोभिड अस्पतालमा म्यानेजमेन्टको टिमको लागी ५ जनाको समिती बनाइएको बुझिएको छ।